Taliban oo ugu dambeyn afka furatay Turkeyna garab ka dalbatay maxaa soo kordhay – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
November 27, 2021 Abdiraxmaan Hassan 2
Maulvi Abdul Kabir Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Xukuumadda KMG ah ee Afgaanistaan ​​ayaa sheegay in dalkiisa uu si gaar ah ugu baahan yahay caawinta Turkiga.
Arintani ayaa waxay timid kadib markii uu Sabtidii maanta Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Afgaanistaan la kulmay safiirka Turkiga u fadhiya magaalada Kabul ee Jihad Arginai.
Abdul Kabir ayaana wuxuu sharaxay in dowladiisa ay dooneyso in Turkiga uu maalgashi badan ku sameeyo gudaha Afgaanistaan. Wuxuuna intaa ku daray in saaxiibtinimada Kabul iyo Ankara ay soo socotay sanado badan, isagoona muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay howlaha hay’adda iskaashiga iyo isku xirka Turkiga ee “TIKA” kawado gudaha Afgaanistaan.
Waxa uu tilmaamay in haweenka Afgaanistaan ​​ay haatan bilaabeen in ay ka qeyb qaataan shaqooyin badan, islamarkaana dib ugu soo celinta gabdhaha dhanka waxbarashada iyo Iskuulada ay bilaaban doonto sanadka soo socda.
Danjire Arginai ayaa dhankiisa sheegay in Turkiga uu gargaar bini’aadantinimo u fidiyo dadka dhibaateysan ee reer Afgaanistaan ​​isagoo u sii marsiinaya hay’adaha rayidka ah iyo hay’adda bisha cas.
Waxa uu intaa ku daray in TIKA ay sidoo kale bixiso nooc kasta oo taageero ah oo ay u baahanyihiin hay’adaha samafalka Afgaanistaan, sidoo kalana ay gargaar gaar siiso dadka tabaalaysan ee reer Afgaanistaan.
Arginai oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri: “Ganacsatada Turkiga waxay rabaan inay xoojiyaan maalgashigooda gudaha Afgaanistaan.” Wuxuuna intaas ku daray: “Toddobaadyada soo socda, wafdi ganacsato Turkish ah ayaa soo booqan doona Afgaanistaan ​​si ay u arkaan fursadaha maalgashi ee halkaan ka jira”.
Bartamihii bishii Agoosto ee sanadkaan ayay aheyd markii Taliban ay si buuxda ula wareegtay gacan ku haynta guud ee Afgaanistaan, waxayna ku beegneyd ka bixitaankii ciidamada Mareykanka ee dalkaas, taasoo la soo gebagebeeyay isla dhammaadkii bishaas.
Bishii Sebtembar 2021-da xarakada waxay ku dhawaaqday magacaabida koox wasiiro ah oo noqon doona xukuumad ku meel gaar ah oo sii heyn doonto maamulka Afgaanistaan.
Waxaa xusid mudan in dhismaha wasiiradda ay ku dhawaaqeen “Talibaan” uusan ku jirin qof ka baxsan ururkaas, taas badalkeedana dhammaan wasiirada ay qeyb ka yihiin xubnaha ururkooda, taasoona keentay baaqyo ka soo yeeray beesha caalamka, xili ay ku baaqeen in la dhiso dowlad loo dhan yahay oo ay qeyb ka yihiin dhinacyada kala duwan ee bulshada.
Dhanka Turkey Xarakada Taliban ayaa horay u diiday qorshayaal badan oo ay Turkiga doonayeen uguna weynaa gacan kuheynta maamulka Madaarka magaalada Kabul, balse ururka Taliban ayaa ku hanjabay iney weerari doonaan ciidamada Turkiga hadii aysan isaga bixin gudaha Afgaanistaan, maadaama ay qeyb ka ahaayeen ururka NATO, inkastoo ciidanka Turkiga howlo dagaal halkaas u joogin.
Talibaan jiq bey ku jiraan. Shicibkoodu waa dad ay xoog ku haystaan oo cabursan. Talibaanku waxay wajahayaan dhaqaalo xumo aad u baahsan oo ay ku waayaan mushaharka cidamadooda. Cunaqabateyn qarsoon ayey reer galbeedku kaabiga ugu hayn. Turki kaligiis wax naf leh kuma kordhinayo.
50% bulshada reer Afgaanistaan waa haween. haddii ad hawl-gab, naafo, iyo xabis-guri ad haweenka galiso, oo ayan shaqaysan karin, waa inaad bulshooyinka kale ka harto, barwaaqo kasta oo dalkaagu leeyahay wax ma tarayso, dadka kale lama tartami karaysid. Dalkaagu haddii usan barwaaqo lahayn, sida batroolka oo kale, waa in ad TUUGSATAA bulshooyinka kale. Afgaanistaan iyo Soomaalidu isku doon bay saaran yihiin, haweenkoodu markay jidadka marayaan xataa waxay ku dhex jiraan kiishash, oo sanka kaliyaa u bannaan. waa dad la naafeeyay oo awooddi ay noloshooda kula soo bixi lahayeen laga xayuubiyay. Sidee bay dadka kale ula tartamikarayaan. Mind you, waxaan Ardi Sababa ku arkay haween dhallinyaro ah oo fuundiyaal ah oo dhismayaal dhaadheer ku dhisaya bulukeeti; iyo kuwo kale oo shamiitada ku qasaya badiillo. Sida hadda wax yihiin hadday ku sii socdaan laga yaabo in Soomaalidu la tartanto Itoobiya iyo Xabashida.